Proojektiin dildil - Project dldl/ድልድል
Proojektiin dildil/Rikiichaa: Rikiicha qo’aaba amantaa,saalaa fi badhaadhiina fi fayyinaummataa dhiibaa karaa namoota amananni ilaaluu dha
ድልድል/Rikiichii: Qo’aannoon fi qorannoon projeectii kana badhaadhiina fi ciimmiina adda-amantaa, caasaa dhibaa biiya kessaa hirrisuu kan akka Itiiyoophiyaa, Eritiraa fi UK (Ingiilizii) kan kutatee dha. Dldl jechuun afaan Tigriffaadhaan rikiichaaa jechuu yoo ta’uu,jeechii kan ibsuu adeemsa of ibsuu, gita bituumaa male fi tokkuumaadhaan dhiima dhiiba namoota amanaanni ilaalu kan kayyefaate dha.
Projectiin kun Qo’annaa haaraa fi ragaa haaka ilaalchii Amantaa, Tiyoolojii, fi tajaajjiltoonii dhibaa keesaa hirisuu fi Amtadaa dhiibaa biiya keesaa rawwatoota kan motummaa fi mitti motuummaa waliin hojjechuudhaaf kan kuutatee dha.
Projectiin kun kan qopha’ee Mana baruumsaa seena, Amantaa fi fiilosoofii kan ta’ee Yuniversitii SOAS Yunivesrisitii Landontti Hoggantuu UKRI Hoggantoota fulduurattiif kan taatee Dr Romina Istratii dhiyaatee dha. Projectiin Gargaartoota, matti fi meensa garee bay’ee kan barbaaduu yoo ta’uu Yuunivarsitii Akusim (Maqalee, Itiyoophiyaa), Koolleejjii Tewooloojii Qul. Fireemnaaxoos (Maqalee, Itiyoophiyaa), Waldaa Ogeeyyii Seeraa Dubartootaa Itiyoophiyaa (WOSDI), (Finfinnee, Itiyoophiyaa), Komishinii Misoomaa fi Gargaarsaa Mana Kiristaanaa Ortodoksii Itiyoophiyaa (Finfinnee, Itiyoophiyaa), Dhaabbata Diversity Resource International (DRI) (Bringtan, UK) fi Dammee obbolaa Waaninay (Asmaraa, Eeritiriyaa), Yuunivarsitii Bristool (Bristool,UK) fi Yuunivarsitii Sheefild (Sheefild, UK). Maddii galiin isaas Wagootaa Afuuriif Yuniversiituu Qooranoo fi Kallaqaa Landoon (Grabt Ref:MR/T043350/1) fi Mallaqnii dabalataa ammoo Harry Frank Guggenhiem Foundation (Distinguished Scholars Award 2019).
Proojectiin kun kan maddu Kuutanoo Qo’aanaa fi goochaa Ummata galiin isaanii xiiqoo fi giddu gallesaa ta’ee danddeetti Okkettaa fi jiraata ta’ee ummataa ta’ee beksisuu dha.Seenaa kessatti, fayyaa ummataa fi illalchii saala fi Daggagiinaa ilaalcha Amantaa fi ilaalcha Amantaa bu’uureesen malee xiyyefannoon itti hin kennamnee turee. Xiyyefannoon dhimma goosaa fi qoomo yoo dabaluu kaka’uumsii bay’een namoota amantaattiin yoo addemsifamuu, yoo amma xiyyefanoon xiqqo ille dhimma Seena, Saalaa, fi Saayikooloojii akkamitti ilaalcha dhiibaan biyyaa kessa karaa adda ummatattin kallatti amaantattin xiyyefannon itti hin kenamnee.
Maddi oddefanoo projectii kan Qo’annoo kan duuraa dhimma gosaa irratti akka Kabba Itiyoopiyyaa ammantoota orthodoksii tewaahidootiin wal qabatee dha. Argannoon qo’anna kan agarsisuu qooqnii amantaa akkamitti lubbotaa fi amantootaa birratti akka hubatamuu fi baratamee akkasuumaas dhibbaan nannoo akka ummata badiyyaa fi magalaa nanno kaaba Tigiraayitti fi gahee quudaa lubbotaa wa’ee ga’illlaa fi taatewwan walitti bu’iinsaa fi jequumsaa araarsuu kawwameeraa. Haa ta’uu malee lubboonni tokko tokko rakko qophii bekuumsaa dhimma Sayiikoloojii xaxamaa akka saxiiledhama fi yakka fi balaa gesiisaan ,jeechoonii Tiyoolojiin fayyadamaan fi ilaalchaa jequumsaa jijjiruu ga’iilaan wal qabattee fi wal dansa’uu(qo’annaa dhiyaatee You Tube irratti Cambridge Centre for Christianity Worldwide irrattti dawwadhaa).
Projectiin kun kan qabate: qo’annoo garafaraa Ethiopia kessatti ademsiifanan ragaa quubsaa dagaagsuu irratti akammitti ilaakchii, Tiyoloojiin fi lubbonni rakkolee kanneen fagesuuf fi ammalaa yakka fi yakkaaf saxiilamuu wal qabatee gargaarsa saayikoloojii fi yakkamtootaa dhiyesanii kuunumsuu kan hammatee dha. Qo’annoon kun hojjilee workshoppii lubbootaa waliin akka biyyaatii gahee bahuu guddisuuf dhimma ga’illaa fi dhiibbaa naannoo fi saxiilmtootaa yakka garargaruu(sirresuudhaan) fi balaa yakkamtoitaa irratti gahuu danda’uu hirisuuf. Kayyoon waliigalaa projectii kanaa qammoolee dhimmi ilaalatuu kan mootuumaa ta’ee mitti motuumaa fi hoggentootaa Amantaa wallitti qindesuudhaan cassaa dhibaa rakko nanoo ilaaluu hundesuu dha.
Projectiin kun gaar Ertriyaatti, halaa garagarattiin Amat-Adaa fi Afaan garagaraan Tigiriifa dabalatee Hoordoftootaa Ortoodoksii tewahidootiif ni kennamaa. Duubartonnii Eritiriyaa dhimma hawasuuma irratti si’aadhuuf seenaa wagootaa heduu qabuu kesuumatuu carraa barnootaa argachuuf. Akkuuma Ethiopia. Eritiriyaan waraana fi werara alaa Ishee Mudeeteraa. Kanaafiis dubartoonni gahee gudda akkuum tabatanitti rakkoo kana ille halaa walfakkataa ta’een yeroo kannatiis jijjiruu qabuu.
Projectiin kun dawwo qaroominaa callaattii walitti dhuufeenyaa Seenaa waraanaa, dhibaa adaa fi dhibaan nanno kan walliti dhufeenyaa qabuu dha. Qo’anno hara’aa adamsisuuf is jiruu kana halaa galuumsaa isaattin dhibaa nannoo Amant-adaa fi saalaa waliin kesuumatuu seena eritiyaa ilaala. Hojjiin projectii kaanaa Dhabataa Amantaa, Motuumma fi Mitti Mootuumaa waliin dhiibaa nannotiif caasaa gargaruu ummuu dha. Kessumatuu ummata Eritiriyaatiif
Qo’annoon, giddu galuumaan fi waal jijjiraan beekumsaa akka Etiyoophiyyaa fi Eritiriyaa yadamee oddefanno addeemsaa jijjirama Amant-adaa si’eesuu UK ‘s secteeraa dhiibaa nanno adda saboota viyyootaa bay’ee wallin Kessunatuu godaantoota Eritiriyaa fi Etiyoophiyaa ni qabataa. Ragaan dhiibaa guudaan goodantoota irratti akka gahaa jiruu agarsisuu ni jira. Haa ta’uu secteera dhiimma naannootiin fuuremuu hin dandeenye. Projectiin kun gad fageenyaan yeroo amma jiran Halaa dhabanii amantaa akkamitti qindoominaan hoojechaa akka jiran fi tajajilaa kenemaa jiruu guddisuuf gargaraa.
Projectiin kan kayyefatee giddu galuu dhibbaa bu’uura godhatee furmaataa kenuu irratti kan xiyyafatee, furmaata seenaa rakkolee yeroottif kan hojeetuu dha.
Bakka buusuFakkki Tooftaa projeectii, bu'aa fi dhibbaa
Tooftaa fuufinsaa qabuu
Kayyo keenya ijjoon akka riikicha tajaajjiluu fi siirna baruumsa mijeesuu fi beekumsaan waal gedderuu waal gargaaruu qooda,sectaraa, fi tiyoorii dhiibaa duubartootaa nannoo fi adeemsaa is agarsisuu. Caalaatti kaayoo keenya keeyoo proojectii huubachisuu dha.
Maatii, qooda fuudhatoota, fi hawwaasafi ummata haala qo’anna fi adeemsa isaa kessa hirmachisuu.
Bekuumsaa qabiiyyee irratti xiyyefattee ijaaruu fi ragaa haraa dagaagsuu.
Dhibbaa nannoo miisoomaa bu’uuratiin wal qabsisuu fi tokkuumaa miilkesuuf kuutanoo fudhachuu fi irra dedebbi hambisuu.
Waal jijjiraa beekuumsaa fi hiirmaana uumataattiin beruumsa, mattiimaa fi hubannoo walitti dhiyesuu.
Bu'aa fi argannoo cimaa
Projeectiin kun bu’aa fi argaanoo tilmaamame kan dabalatuu:
Riikichaa baramaa garri qo’anna Amantaa, badhadhiina fi fayyaa ummataa dhibbaa nannoo karaa namoota Amananniin jiruu ni agersiisa.
Sirnii barnootaa fi leenjii Afaan garagaraan Lubbootaa, namoota dhiiba nannoo uumaniif fi dhiima kenaan wal qabatte namoota qo’aataniif kan dhiyatee dha.
Dirreen kuun qoodaa fudhatootaa haraa biffa tokkumma’een dhiiba namoota anananii kan beeksisuu dha.
Sagantaan yallii kana afaan Amantaa fi Afuurawaa ta’een kan dhiyatee yeekemtootaa fi saxilamtootaa gargaruuf.
Dhiibaa Qoola bay'ee
Projeectiin kun dhibba ka’uumsa kan godhatee fi kayyoo gahee itti fuufaa qooda fuudhatootaaf, miseensa garee projeectittiif fi hawwasaa dhibba kennaan midhamaan kan davaluu.
Qophiin garri Lubbotaa fi leenjiitootaan dhibbaa nannootiif kan saxilamaan fi yeekemtoota hawaasaa keesa jiraan debbisuu.
2.Si’aadhiina Amant-Adda motummaa fi mitti motummaa biyootaa projectii dhiibaa nanno kessatti hammataman.
Caasaa cimaa tokkumoomme fi dhuumataa midhamaan gargaaruu.
Mattimnaan fi beekuumsa degaageen miseensoota hirmaana isaanii gidduu gala osoo hin tasisiin wallin akka fayyadamaan.
Wa’ee projeectii odeefanno dabalataa you barbaadan,malloo kan naa qunaamuu dandessu Dr. Roominaa Istiraatii (ri5@soas.ac.uk) ykn email projectii kanaaf qopha’een (soasfif@soas.ac.uk).